iSourplum Njengomthi Oliyeza
I-Sourplum Njengomthi Oliyeza
iSourplum enkulu Ximenia caffra ngumthi omncinci okanye ihlahla elivelisa iziqhamo ezibomvu-na orenji ezityiwayo ezikwahona nakwi misebenzi yesintu. Ivame ukusetyenziswa njenge sipili sokuvala egadini ukutsala iintaka ezitya iziqhamo nama bhabhathane, ingakhula ukuyo kuma ku 6m ubude kunye namasebe wayo. Lomthi uyakwaziwa njenge wild plum okanye monkey plum.
iSourplum ikhula ehlathini, engceni nakwi ndawo ezinamatye uyakhula nakwi (termite moulds). eMzantsi Afrika ezintlobo zimbini zikhula kummandla ongaphesheya we Northen kunye ne Central eLimpopo (var.caffra) kunye eMpumalanga, Limpopo nakwa Zulu Natal (var.natalensis).
Phantse esisityalo siyasetyenziswa Sonke. Amagqabi acoliweyo asetyenziswa ekuvaseni amehlo, umqala obuhlungu (tonsillitis) nokucoca umzimba ngaphakathi. Amagqabi agutyiweyo angu mgubo asetyenziswa ukunceda ukungazali nomkhuhlane. Ingcambu ezigutyiweyo zisetyenziswa ekutyeni okufana nesuphu notywala obuyi bhiya, inyusa nomdla wocantsi, inceda nezilonda, logama ipapa eyenziwe ngengcambu yalomthi inganceda isicavucavu kumntu omithiyo. Esisiqhamo simuncu siphezulu kwisakha mzimba uvitamin C (27%), ityiwa zintaka, izilwanyane, nabantu bangayisebenzisa kwi jam. Namandongomane ayatyiwa. Lomthi uqinile kwaye usetyenziswa ukwenza imiqheba yezixhobo ekhontrakhini.
Imbewu inesivuno esiphezulu esingu (60-70%) we oli engasulekiyo emfaxangwa ibanda. Ityebile kwi (monounsaturated fatty acids) kwaye asetyenziswa nje ngamafutha kwizibane zeglasi, ukwenza amafele ezilwanyane athambe, nokuthambisa nge oli amaxhadi.
Ngenxa yengxenye yamafutha atyebileyo iximenia oil ayinangxaki ne rusi. Ithintela ukuguga, kwaye ilungile kakhulu njengama futha okuthambisa. Isetyenziswa njemafutha omzimba ne nwele, ityebile kwi ximenynic acid enceda ukunciphisa ukukhula. Izifundo kwi ximenynic acid zibonakalise umahluko ekuncedeni igazi lingami. Ukubaleka kwegazi kwenyuka kubantu abango mama abane minyama, ngokuqaba lamafutha ane 0.5% ye ximenynic acid.
i-Ximenia ikhuliswa lula kwi mbewu esentsha kumlinganiselo we 5:1 womxube wesanti nomgquba. Iyanyamezela kwi mbalela, adiyidibani ncam nekhephu ingakhula ukuyokuma ku 0.5 m enyakeni.
Ezinkcukacha zezokufundisa nokwazisa kuphela kwaye azifanelanga ukuthathwa njenge ngcebiso kaGqirha. Olu lwazi alunazo injongo zokuthatha indawo ye ngcebiso namayeza ka Gqirha okanye unyango olunikezwa ngabezempilo ngoku semthethweni.